ပႈပါ Francis ပဏလီၚ၀ဲ တႈစံဏတဲၚတဲလီၚတႈသးခုကစီႈအလါလီၚလီၚဆီဆီ တႈကစီႈ | Radio Veritas Asia
ပႈပါ Francis ပဏလီၚ၀ဲ တႈစံဏတဲၚတဲလီၚတႈသးခုကစီႈအလါလီၚလီၚဆီဆီ တႈကစီႈ
ပႈပါ Francis ပဏလီၚ၀ဲ တႈစံဏတဲၚတဲလီၚတႈသးခုကစီႈအလါလီၚလီၚဆီဆီ( Extraordinary Missionary Month) ဖဲလါအီးကထိဘ႕ဥ ၁ သီအမုႈနံၚယ
ပႈပါ Francis ပဏလီၚ၀ဲ တႈစံဏတဲၚတဲလီၚတႈသးခုကစီႈအလါလီၚလီၚဆီဆီ( Extraordinary Missionary Month) ဖဲလါအီးကထိဘ႕ဥ ၁ သီအမုႈနံၚယ ဒီးဃ့ကညး၀ဲပွၚစီဆွံဖိသဥဎ့ဥရွဴးအနီႈတ့ရ့စါ ဒ္အမ့ႈ၀ဲပွၚလ႕အကြႈထြဲပ႕ဆွ႕ ပွၚစိဏဆွ႕တႈသးခုကစီႈအသိးနဥ့လီၚ’
ဖဲလါအီးကထိဘ႕ဥတသီအမုႈနံၚ အတႈဘါထုကဖဥတႈလ႕ ဟါလီၚခီအကတီႈ ပႈပါ Francis စံး၀ဲလ႕ ဖိသဥဎ့ႈရွဴးအနီႈတ့ရ့စါ ပဏဖ်ါထီဥနဥ့ပွၚက်ဲလ႕အလီၚဂဏဒ္ စဲဖီကဟဥအသိ လ႕တႈစိဏဆွ႕တႈသးခုကစီႈအတႈဖံးတႈမၚ လ႕ဟီဥခိဥခ်႕အပူၚနဥ့လီၚ’
အအံၚမ့ႈစ့ႈကီးဖဲစီဆွံအလါယဒီးလ႕တႈသးခုကစီႈကသလဏလီၚအသးအဂီႈ မ့ႈပထုကဖဥတႈဆံးအါဆံးအါယ ဒီးပတႈလဲလိဏကြံဏပသးလ႕ တႈတကနဥဃုဏတႈ ဆူတႈဖံးဃုဏမၚဃုဏတႈ အိဥ၀ဲဆံးအါဆံးအါအဂ့ႈ ပႈပါ Francis သံကြႈ၀ဲနဥ့လီၚ’
လါအီးကထိဘ႕ဥ မ့ႈလါလ႕တႈကြဥထံဆိကမိႈဒီး တႈထုကဖဥတႈလ႕ တႈအိဥဖွိဥကရ႕အတႈဖံးတႈမၚအဂီႈယ ဒီးပႈပါ Francis ဃုထ႕ထီဥ၀ဲလါအီးကထိဘ႕ဥအံၚ ဒ္အမ့ႈတႈစိဏဆွ႕တႈသးခုကစီႈအလါ (Missionary Month) ဘဥဃးဒီးတႈရၚလီၚတႈစူဏတႈနဥ လ႕ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥအဂီႈနဥ့လီၚ’
သီခါလ႕အမံၚမ့ႈ၀ဲ Fr. Fabrizio Meroni လ႕အဘဥမူဘဥဒါ ဘဥဃးဒီးတႈသးခုကစီႈအတႈဖံးတႈမၚ လ႕တခီဘီမုႈ စံး၀ဲလ႕ယ”ပသုတဘဥသးပ့ႈနီႈ၀ဲလ႕ တႈထုကဖဥမ့ႈ၀ဲ တႈအိဥဖွိဥကရ႕အတႈဖံးတႈမၚအသးသမူယ လ႕အဒုးစံဏ၀ဲပသူဥပသးနဥ့လီၚ’
တႈအိဥဖွိဥကရ႕အတႈစိဏဆွ႕၀ဲတႈသးခုကစီႈအတႈမၚ မ့ႈဘဥကြႈဆ႕ႈမဲဏ၀ဲ တႈဂ့ႈကီသ့ဥတဖဥဒီးယ အခီပညီ တႈစူဥတႈနဏယ တႈအိဥဖွိဥကရ႕ ဒီးတႈသူဥထီဥအက်ဲကပူၚ တႈသ့ဥတဖဥအံၚအဖီခိဥ ပွၚသးတအိဥကြႈဆိကမိႈလ႕တႈ ဘဥဃးဒီးတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚဟီဥခိဥအဃိအဂ့ႈ စံးကဒီး၀ဲနဥ့လီၚ’ လ႕နဥ့အမဲဏညါ တႈအိဥဖွိဥကရ႕ ကဘဥမ့ႈ၀ဲ တႈပနီႈလ႕အအိဥဖ်ါ၀ဲ ဘဥဃးဒီးဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ တႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚ အတႈခီဥထံးအဂီႈနဥ့လီၚ’
ဖဲ ၁၉၂၇ အနံဥယ ပႈပါပံဥအူ ၁၁ ဒုးဟူထီဥသါလီၚ၀ဲလ႕ ပွၚစီဆွံဖိသဥဎ့ႈရွဴးအနီႈတ့ရ့စါ မ့ႈ၀ဲပွၚကြႈထြဲမၚစ႕ၚတႈအိဥဖွိဥကရ႕အတႈဖံးတႈမၚနဥ့လီၚ’ ပွၚစီဆွံအံၚ သံ၀ဲဖဲအသးအိဥ၀ဲ ၂၃ နံဥအကတီႈယ မ့ႈပွၚလ႕အလုႈထီဥအတႈထုကဖဥတႈ ဒီးအတႈတူဥဆါအသးသ့ဥတဖဥ လ႕ပွၚစိဏဆွ႕တႈသးခုကစီႈအဂီႈယ ဒီးကြဲးစ့ႈကီး၀ဲလံဏတဘ့ဥ (The Story ofaSoul) အပူၚ လ႕ပဏဖ်ါထီဥအတႈသူဥဆူဥသးဂဲၚ လ႕နီႈသးသ့ဥတဖဥအတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚအဂီႈနဥ့လီၚ’
တႈဂ့ႈမိႈပွႈလ႕ တႈစိဏဆွ႕တႈသးခုကစီႈအလါအံၚမ့ႈ၀ဲယ”ဒိးနဥ့တႈသ့စီ ဃုဏဒီးတႈမ႕လီၚပွၚ (baptized and sent)ယ ခရံဏအတႈအိဥဖွိဥကရ႕ ဖံးတႈမၚတႈလ႕ ဟီဥခိဥခ်႕ (The Church of Christ on mission in the world.) မ့ႈ၀ဲပႈပါ Francis အတႈကတိၚဆူဥထီဥတႈလ႕အမ့ႈယ”မတၚတဂၚမး အသုတဘဥအိဥပူၚဖ်ဲးအသးဒီး တႈအိဥဖွိဥကရ႕အတႈဖံးတႈမၚဘဥနဥ့လီၚ’
Source: Catholic News Agency Oct 1, 2019